वर्ष उत्कृष्ट को? रोनाल्डो, मेस्सी कि लेवान्डोस्की?
नेपाल लाइभ मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७, १३:४७
काठमाडौं- विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले वर्ष २०२० का लागि दिने उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको अवार्डका लागि शीर्ष तीनमा लगातार देखिएका क्रिष्टियानो रोनाल्डो र लियोनल मेस्सीसँगै नयाँ अनुहार रोबर्ट लेवान्डोस्की रहेका छन्। गएको वर्षको खेलका आधारमा तीनमध्ये एकले वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको अवार्ड जित्नेछन्।
गएको वर्ष फिफा उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको अवार्ड स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान रहेका अर्जेन्टिनी खेलाडी लियोनल मेस्सीले जितेका थिए। गएको वर्ष लिभरपुलमा रहेका नेदरल्यान्ड्सका भर्जिल भ्यान डाइक दोस्रो र युभेन्टसमा रहेका पोर्चुगलका क्रिष्टियानो रोनाल्डो तेस्रो स्थानमा थिए।
उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीसँगै अन्य विभिन्न सात विधाको मनोनयन फिफाले सार्वजनिक गरेको हो। जसमा उत्कृष्ट महिला खेलाडी, उत्कृष्ट महिला गोलकिपर, उत्कृष्ट पुरुष गोलकिपर, उत्कृष्ट महिला टिम प्रशिक्षक, उत्कृष्ट पुरुष टिम प्रशिक्षक र वर्ष उत्कृष्ट गोलको मनोनयन छ।
मनोनयनमा रहेकालाई फिफा सम्बद्ध देशका राष्ट्रिय टिम कप्तान, प्रशिक्षक र एक मिडिया प्रतिनिधिले भोट गर्नेछन्। त्यसका साथै फिफाको वेवसाइटमा गएर समर्थकले समेत भोट गर्न पाउनेछन्। जसमा अन्तिम नतिजा १७ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक हुनेछ। जसमा विशेष ध्यान वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीमा नै रहनेछ।
जसमा उत्कृष्ट ११ मा रोनाल्डो, मेस्सी र लेवान्डोस्कीसँगै बायर्न म्युनिकबाट लिभरपुल गएका स्पेनका थियागो अलकान्टारा, म्यानचेस्टर सिटीमा रहेका बेल्जियमका केभिन डि ब्रायन, लिभरपुलमा रहेका सेनेगलका सडियो माने, पिएसजीमा रहेका फ्रान्सका केलियन एमबाप्पे, पिएसजीमा रहेका ब्राजिलका नेमार, रियल मड्रिडमा रहेका स्पेनका सर्जियो रामोस, लिभरपुलमा रहेका इजिप्टका मोहम्मद सलाह र नेदरल्यान्ड्सका भर्जिल भ्यान डाइक थिए।
सन् २०१६ र २०१७ मा फिफा वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको अवार्ड जितेका रोनाल्डोले त्यसअघि फिफा वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी र फ्रान्स फुटबल म्यागजिनले दिने बालोन डि’ओर संयुक्त रुपमा दिइँदा २०१३ र २०१४ मा उत्कृष्टको अवार्ड जितेका थिए। त्यसअघि फिफाले फिफा विश्व उत्कृष्ट वर्ष खेलाडीको नाममा दिने अवार्ड रोनाल्डोले २००८ मा जितेका थिए।
गएको वर्ष रोनाल्डो सिरि ए मा विजेता र कोपा इटालियामा उपविजेता रहे। च्याम्पियन्स लिगमा अन्तिम १६ बाट बाहिरिएका रोनाल्डो उपाधिका हिसाबले उत्कृष्ट देखिएका होइनन्। उनी सिरि ए मा पनि गएको वर्ष सर्वाधिक गोलमा दोस्रो स्थानमा थिए। २०१९-२० मा उनले ४६ खेलमा ३७ गोल र ७ असिस्ट गरेका थिए। सिरि ए मा ५० गोल पूरा गरेका उनी प्रिमियर लिग, ला लिगा र सिरि ए मा ५० गोल गर्ने पहिलो खेलाडी हुन्।
‘गाह्रो समयमा सिरि ए को उपाधि जित्न सक्नु हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो। व्यक्तिगत रुपमा हेर्दा युभेन्टसबाट ३७ गोल र पोर्चुगल राष्ट्रिय टिमबाट ११ गोल गरेर मैले आफ्नो उद्देश्य र खेलमा अझ राम्ररी बढ्ने हौसला पाएको छु। खेल जीवनमा ७५० गोल पूरा गर्न सक्दा पनि म खुसी छु’ रोनाल्डोले भनेका छन्।
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनामा रहेका अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सीले फिफा उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड छ पटक जितेका छन्। फिफा विश्व उत्कृष्ट वर्ष खेलाडीको नाम दिइने अवार्ड २००९ मा जितेका उनले फिफा वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी र फ्रान्स फुटबल म्यागजिनले दिने बालोन डि’ओर संयुक्त रुपमा दिइँदा २०१०, २०११, २०१२ र २०१५ मा जितेका थिए। फिफा वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको नाममा अवार्ड दिइँदा उनी गएको वर्ष २०१९ को विजेता बनेका थिए।
३३ वर्षका मेस्सीले गएको सिजन बार्सिलोनाबाट ४४ खेलमा ३३ गोल र २५ असिस्ट गरेका थिए। जहाँ उनी स्पेनिस ला लिगामा सर्वाधिक गोलकर्ता पनि बने। ला लिगामा उनले ३३ खेलमा २५ गोल र २२ असिस्ट गरेका थिए। जुन युरोपका ठूला पाँच लिगमा एकै सिजन २० भन्दा बढी गोल र २० भन्दा बढी असिस्ट गर्ने मेस्सी एक्ला खेलाडी बने।
उनी लगातार १२ ला लिगा सिजनमा २० भन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी पनि बने। च्याम्पियन्स लिगमा गएको सिजन ८ खेलमा ३ गोल र ४ असिस्ट मात्र गरे पनि उनी च्याम्पियन्स लिगमा फरक ३४ टिमविरुद्ध गोल गर्ने एक्ला खेलाडी बनेका थिए। गएको सिजन अन्य सिजनको तुलनामा कमजोर मानिए पनि मेस्सीको तथ्यांक अझ उत्कृष्टमा नै देखिन्छ।
लेवान्डोस्की पहिलो पटक फिफा उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयनमा परेका हुन्। बायर्न म्युनिकमा रहेका पोल्यान्डका लेवान्डोस्की पछिल्ला वर्षहरुमा उत्कृष्ट खेलमा चिनिँदै आइरहेका छन्। ३२ वर्षका उनको गएको सिजन त अझ उत्कृष्ट देखिएको थियो। गएको सिजन उनले च्याम्पियन्स लिग, बुन्डेस लिगा, डिएफबी कप, जर्मन सुपर कप र युइएफए सुपर कपसहित पाँच उपाधि जितेका थिए।
गएको सिजन बायर्न म्युनिकका लागि लेवान्डोस्कीले ४७ खेलमा ५५ गोल र १० असिस्ट गरेका थिए। जहाँ बुन्डेस लिगामा ३१ खेलमा ३४ गोल ४ असिस्ट, च्याम्पियन्स लिगमा १० खेलमा १५ गोल ६ असिस्ट, डिएफबीमा ५ खेलमा ६ गोल गरेका थिए।
‘जब धेरै गोल गरिएको छ र मिल्ने जति सबै उपाधि जितिएको छ भने यस्तो अवस्थामा मैले आफूलाई अरु कसैसँग तुलना गर्न चाहन्नँ। हामी अहिले पूरा टिम नै उत्कृष्ट हौँ, यसमा कुनै दुविधा छैन’, लेवान्डोस्कीले भनेका छन्, ‘हुन त उनले अहिलेसम्म जे जस्तो गरेका छन् त्यसका आधारमा मेस्सी जस्ता खेलाडी पाउन एक सय वर्ष पनि लाग्न सक्छ, त्यसैले उनी फुटबल इतिहासका महान खेलाडी हुन्।’